Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Mormiin ummataa Naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa ture fi miidiyaalee addunyaa
Mormiin ummataa Naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa ture fi miidiyaalee addunyaa
Mormiin ummataa Naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa ture fi tarkaanfii hidhattonni mootummaa fudhatan miidiyaalee addunyaa gurguddaan Kan akkaa BBC,Aljaziiraa, United press International, Doche Veelle, The guardian, The Telegraph fi kanneen biroon bal’inaan gabaasanii jiru.
BBC ajjeechaa sanbata fi dilbata darbe magaalota Bahir Dar fi Gondor keessatti raawwate yemmuu gabaasu baay’ina namoota du’anii waliin gabaaase jira.
Hiriira mormii dargaggonni Oromoo Magaalaa Finfinneetti bahan dabalatee mormii Oromiyaa guutuu fi Naannoo Amaaraa keesssatti gaggeeffame ilaalchisuun gama Mootummaa Itoophiyaatiin hiriirri sun qaamota itti gaafatamummaa fudhatan hin qabu waan ta’eef fudhatama hin qabu jedhamaa ture jedha.
Ummanni biyyattii garuu ajjeechaa fi hidhaa lammiilee irratti raawwatu mormuuf iyyama akka hin barbaachifne beeksisuun mormii isaa itti fufee jira.
Mootummaan TPLF yeroo ammaa aangoo mootummaa qabatee jiru sabootaa gugurdaa biyyattii ummata Oromoo fi Amaaraa mirga isaanii dhiibuun akka bulchaa jiru ibsee jira.
Mormii Bahir Daritti gaggeeffameen namoota hedduun akka bahan fi kan gabaase BBC n lammiileen ammaaf baayyinni isaanii hin beekamne akka ajjeeffaman beeksisee jira.
Mormii sanbata darbe biyyattii bakkeewwaan garagaraa keessatti gaggeeffameenis hidhattonni mootummaa aaraa nama immimaanneessuu fi rasaasaa hiriirttota irratti dhukaasaniiru.
Miidiyaan United press Internashinaal akka gabaasetti, mormiin sanbata xiqqaa darbe magaalaa Finfinnetti gaggeeffame mormii ji’oota saddeet darban Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture irraa kan gara Finfinnee seensisee yemmuu ta’u, hiriirttoota irratti miidhaan garagaraa akka raawwatee fi namoonni hedduun hidhaman achi buuteen isaanii akka dhabame himameera.
Mormii Magaalaa Bahir Daritti gaggeeffameen immoo namoonni 6 yemmuu ajjeeffaman ummanni biyyattii loogii Mootummaa wayyaanneettiin isaan irra gahu obsuu dadhabuu isaa agarsiisa jedhaniiru.
Hojiiwwaan Mootummaa sadarkaa gaarii kan to’atan fi carraa hojii gaarii kan argatan miseensota paartii mootummaa Sanaa ta’uu kan gabaasan saba himaleen kunneen bakkeewwan dhimma nageenyaa, diinagdee fi siyaasaa gurguddaan dhalattoota saba Tigrayiin akka hoogganamu beeksisee jira.
Mormii Oromiyaa keessaa bal’inaan kan gabaase aljaziiraan Gondoritti namoonni lama akka ajjeeffaman Oromiyaa keessatti namoonni hedduun akka ajjeeffaman himuun, mootummaan Itoophiyaaa hanga namoota du’anii himuuf fedhii akka hin qabne gabaaseera.
Dhukaasaa hidhatonni mootummaa namoota hiriira bahan irratti fudhataniin yoo xiqqaate lammiileen 50 ta’an akka ajjeeffaman barruleen biyyaa kessaati maxxanfamuu Addis Standard gabaasee jira.
Keessumattuu Oromiyaa Godiina Arsii Lixaa jalatti magaalaallee argaman kanneen akka Asaasaa, Adaabaa, Shashamannee fi Kofalee keessatti ajjeechaan hammaan akka raawwate namoota ijaan argan wabeeffachuun gabaasee jira.
Akkasumas godina Shawaa dhihaa Magaalota Amboo fi Ginciitti tarkaanfii gara jabeenyaa humnonni hidhattoota agaazii fudhataniin namoonni akka gar malee miidhaman gabaasee, sanbata duraa darbe qofaa Oromiyaa keessatti yoo xiqaate namoonni 30 akka ajjeeffaman beeksisee jira.
Nmaoota du’anitti dabalataan lammiileen dhibbootaan lakka’aman rasaasaan rukkutamanii balaan maddaa’uu akka irra gahee fi kanneen lakkofsi isaanii hin beekamne immoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaa argaa jiraachuu gaazeexaan Addis Standard gabaasee jira.
Haaluma walfakkaattuun magaalota Gondor fi Bahir Daaritti tarkaanfii hidhatonni agazii fudhataniin namoonni 20 yemmuu ajjeeffaman kanneen biroon balaa maddaa’uu fi hidhaaf saaxilamaniiru.
Qaamooleen mootumma biyyattii hiriira seeraan alaa ittisuuf hidhattonni isaanii tarkaanfii fudhachuu yoo ibsanis, ajjechaa fi miidhaa isaan namoota irra gahan ibsuu irra of qusataniiru.
Jiraattoota naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiraatan irratti sakkata’iinsii manaa manaa akka gaggeeffamaa jiru fi sababa kanaan namoonni hedduun manneen hidhatti guuramaa akka jiran ibsamaa jira.
Mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun lakkoofi namoota ajjeeffamanii kan dhaabbanni mirga namaa 400 jedhee ji’a lama dura gabaasetti dabalataan baayyinni namoota ajjeeffamanii yeroo 600 akka caalee jiru gabaasaaleen adda addaa ni ibsu.
Posted by Hasan Ismail at 11:59 AM